Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL: “Meel Kali-talisnimo ka jirto laysma baryo….” Maxamed Cabdillaahi Uurcadde….Waraysi gaar ah Somaliland.Org
January 29th, 2009 Comments Off Hargeysa (Ogaa)- Guddoomiyaha Shirka Golaha Dhexe ee xisbiga UCID oo shalay ka furmay Hargeysa, Maxamed Cabdillaahi Uurcadde ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabkii ay u dhacday cod-bixintii ay ku shaaciyeen Murashaxiinta xisbigaa uga qaybgalay tartanka doorashada Madaxtooyada ee la filayo inay dalka ka dhacdo 29 March 2009-ka.
Xisbiga UDUB oo ay musharax u yihiin Daahir Rayaale Kaahin & Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa ku guulaystay hogaaminta dalka. tartanka hogaanka waxa marwalba loo adeegsanayay distoorka, xeerka axsaabta, xeerka doorashooyinka, xeer-hoosaadyada axsaabta & adeegsiga hanaanka dimoqraadiyadeed ee caalamka. Kadib markii uu ku guulaystay hogaaminta dalka, xisbiga UDUB waxa horyaalay talada ummada oo dhinac kasta ka ragaadsan, una baahan in la isu geeyo awooda iyo imkaamiyaadka dhaqaale bulsho & taageerada bulshada caalamka si looga soo kabto burburka ku dhacay ummada reer S\_Land. Xisbiga UDUB, si uu u hanto kaalintiisa hogaamineed, waxa haboonayd in uu adeegsado barnaamij siyaasadeed hufan oo qeexaya arrimaha siyaasadeed/dhaq